Qonda iiNkcazo ze-Philosophical of Nominalism kunye neNkalo
Ngaba ihlabathi lenziwe ngamaziko kunye neenkcukacha?
Ukutyunjwa kunye nokuqiniswa kwezona zinto zizikhundla ezibalaseleyo kwintshona ye- metaphysics ejongene nesiseko esisisiseko senyaniso. Ngokutsho kweengqinamba, zonke iinkampani zinokuqulunqwa zibe ngamaqela amabini: iinkcukacha kunye neyunivesithi. Otyunjelwayo kunokuba bathethe ukuba kukho iinkcukacha kuphela.
Ngaba Abaphili Bayo Bayayiqonda Ukuyiqonda?
Iingcali zibonisa ukuba kukho iindidi ezimbini zeenkcukacha, iinkcukacha kunye neyunivesithi.
Iinkcukacha zifana nomnye ngenxa yokuba zikwabelana ngamaziko onke; Ngokomzekelo, inja nganye inemilenze emine, inokuthi igubungele, ibe nomsila. IiYunivesithi ziyakwazi ukufana nezinye ngokwabelana ngezinye iindidi; Ngokomzekelo, ubulumko nobubele bufana nomnye ngokuba zibini zombini. UPlato noAristotle bephakathi kwezona zinto zidumileyo.
Ukubonakala okubonakalayo kokubonakalayo kubonakala. Inyaniso ivumela ukuba sithathe ngokungathí sina isifundo-isakhiwo senjongo yesincoko esimele sibhekiselele kuyo ihlabathi. Xa sitsho ukuba uSocrates uyilumko kuba kubakho bobabili uSocrates (okhethekileyo) kunye nobulumko (jikelele) kunye neyona nto ibonisa i-universal.
Ukuyiqonda kwakhona kunokuchaza indlela esilusebenzisa rhoqo. Ngamanye amaxesha iimpawu zezifundo zentetho yethu, njengokuba sisithi ubulumko bubungqina okanye obomvu ngumbala. I-realist inokutolika ezi ntetho njengoko ziqinisekisa ukuba kukho yonke indawo (ubulumko; obomvu) obonisa omnye ummandla jikelele (ubuhle; umbala).
Abatyunjwe njani Abaqeshwe?
Abakhethiweyo banikeza inkcazelo ebalulekileyo yento yokwenyani: akukho ihlabathi jikelele, iinkcukacha kuphela. Ingcamango eyintloko kukuba ihlabathi lenziwe kuphela kwiinkcukacha kunye neyunivesithi yenziwe ngokwayo. Bavela kwinkqubo yethu yokumamela (indlela esicinga ngayo ngehlabathi) okanye kwiilwimi zethu (indlela esithetha ngayo ngehlabathi).
Ngenxa yoko, ukutyunjwa kwamagama kubandakanyeka ngokusondeleyo nakwi-epistemology (ukufundwa kwezinto ezichasayo inkolelo enyanisekileyo kwimbono).
Ukuba kukho kuphela iinkcukacha, akukho "ubuhle," "iipulo," okanye "abafana." Kukho, kunoko, iindibano zabantu ezithatha ukuhlanganisa izinto okanye iingcinga kwiindidi. Ubuhle bukhona kuphela ngenxa yokuba sithetha oko: kungekhona ngenxa yokuba kukho ukupheliswa kwendalo. Ii-aples zikhona nje ngohlobo oluthile lweziqhamo kuba thina njengabantu siye sahlula iqela leziqhamo ezithile ngendlela ethile. Ububi kunye nobufazi, ngokunjalo, zikhona kuphela kwingcamango yabantu kunye nolwimi.
Abaninzi abachazileyo baquka abafilosofi bama- Medieval uWilliam wase-Ockham (1288-1348) kunye noJohn Buridan (1300-1358) kunye nomfilosofi wangaphambili uWillard van Orman Quine.
Iingxaki zokutyunjwa nokuQongwa
Ingxoxo phakathi kwabaxhasi bezo nkampu ezichasene nazo zakhupha ezinye zeengxaki eziphazamisayo kwi-metaphysics, ezifana ne-puzzle ye-shipus ye- Theseus , iphazili yeekati eziyi-1001, kunye neengxaki ezibizwa ngokuba yingxaki (oko kukuthi, ingxaki indlela iinkcukacha kunye neendawo zendalo zidibana ngayo). Iipuzzle zayo ezinjengalezi ezenza ingxoxo malunga neentlobo eziphambili zeemetaphysics zinzima kwaye zinomdla.
Amaqiniso Ngeentaba zeSneffels
Yiyiphi i-Safety Stop?
Iifoto ze-Abu Ghraib zoThutho lwase-US kunye nokusetyenziswa kakubi kweentolongo zase-Iraq
I-Quiz yokuHlola: Amagama aqhelekileyo adidekile
I-Your Essay Isistim Isivakalisi
Ukuxhatshazwa kunye noKhuselo-ngu-Martha Gruening
Ngaba i-Astronomy, i-Astrophysics ne-Astrology Yonke into efanayo?
Indlela yokukhetha i-Instrument Musical yokudlala
Indlela yoTywala kwi-Snowboard
Incwadi Yemibala Yempuphu
Ukwazi, Ukunyamekela, Ukuthanda, UkuThula